Nnabata onye isi ụlọ akwụkwọ
Nabata na webụsaịtị ụlọ akwụkwọ praịmarị Wentworth. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna, webụsaịtị ahụ nwere ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ akwụkwọ nwa gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọbịa, biko lelee veranda anyị ka ị hụ ọmarịcha ihe omume ụmụaka anyị na -eme.
Anyị bụ ụlọ akwụkwọ buru ibu, nwere omume enyi, yana yana West Dartford na Kent na East Crayford na mpaghara London nke Bexley.
Anyị na -enwe ọmarịcha ala na ihe ndị dị ebube, gụnyere ọnọdụ nka, ebumnuche wuru ICT Suite, 'ụlọ nchọpụta' (ọba akwụkwọ akụkọ Indiana Jones), Studio Ekepụta, mgbatị ime obodo na 'Ebe a na -eche echiche' (mmekọrịta anyị ime ụlọ imikpu).
Ụlọ akwụkwọ a bụ ihe ndabara ọma n'inwe ndị ọrụ nke ndị nkuzi raara onwe ha nye na ndị na -enyere ndị nkuzi aka yana otu na -achị isi na -akwado nke na -eme dị ka ezigbo ndị enyi anyị.
Ụkpụrụ okwu anyị bụ 'Ime Enwe Obi Ụtọ'. Anyị na -elekwasị anya nke ọma na agụmakwụkwọ ụmụ anyị, na -enyocha ọganihu ha na ịhụ na ha ruru ihe ha nwere. Anyị chọkwara ka ụlọ akwụkwọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ.
Ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịdị ndụ na ebe ụmụaka na ndị okenye na -etolite ghọọ ndị dị ịtụnanya site na nkwado na ịma aka. Wentworth bụ maka ụmụaka.
'Ụmụ akwụkwọ na -etolite nke ọma, ma na agụmakwụkwọ ma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na gburugburu nchekwa, na -azụlite.' OFSTED - Nọvemba 17
'Ọ bụ ụlọ akwụkwọ dị ịtụnanya nke nwere ndị nkuzi pụrụ iche na nnukwu echiche obodo.' OFSTED - Nọvemba 17